Mogok Media: Mogok & Internet
Mogok & Internet
မိုးကုတ် နှင့် အင်တာနက်
ယနေ့ခေတ်သည် သတင်းနည်းပညာခေတ်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အင်တာနက်သုံးစွဲမှုများ တဟုန်ထိုး တိုးတက်လျှက် ရှိနေပါသည်။ ယခုအခါ မိုးကုတ်မြို့တွင်လည်း အများပြည်သူများ အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ရန် Internet Access Center များ အပြိုင်အဆိုင် ဖွင့်လှစ်လာကြသည်။ အင်တာနက်များကို MPT Sattalite Terminal စနစ်ဖြင့် ဆက်သွယ်ထားပြီး ထို PAC များ၌ အိုင်တီစိတ်ဝင်စားသူ မြို့နေလူငယ်များဖြင့် အထူးစည်ကားလျှက် ရှိနေသည်။
အသုံးပြုနေသူ လူငယ်တစ်ဦးကလည်း မြို့နေလူငယ်များအဖို့ အိုင်စီတီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း မိုးကုတ်မီဒီယာသို့ ပြောကြားသည်။ ယခင်က အင်တာနက်ကို Myanmar Teleport မှ IPstar စနစ်ဖြင့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်အချို့ အသုံးပြုခဲ့ကြသော်လည်း မြို့နေလူထု (အထူးသဖြင့် လူငယ်များ) တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ဒေသအတွင်းမှထွက်ရှိသော ကျောက်မျက်ရတနာများ ရောင်းဝယ်ရေးတွင်လည်း သမရိုးကျအဆင့်တွင်သာ ရှိသေးပြီး အိုင်တီဖြင့် ကမ္ဘာ့ကျောက်မျက်ဈေးကွက်သို့ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်မှု မရှိသေးကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ မိုးကုတ်မြို့တွင် ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ တရားဝင် နိုင်ငံခြားငွေ ပိုင်ဆိုင်ထားသော လုပ်ငန်းရှင်များ အမြောက်အများ ရှိသော်လည်း အင်တာနက်သုံးစွဲနိုင်မှုအချိုးမှာ အလွန်နည်းပါးရာ ဓနအင်အားနှင့် အိုင်တီနည်းပညာ အဆက်အစပ်ကို မီးမောင်းထိုးပြသကဲ့သို့ ဖြစ်နေပါသည်။
၁၉၉၇-မတ်ခ်ျလမှ ယခုအချိန်ထိ မိုးကုတ်မြို့၌ ဖွင့်လှစ်ထားကြသည့် Internet Access Center များမှာ -
၁) Mogok Internet Public Access Center
၂) Guiding Star Public Access Center
၃) nse Internet Access Center
(မိုးကုတ်လုပ်ငန်းရှင်အများစုသည် စီးပွားရေးအရ အကျိုးအမြတ်ရရှိမှု မြန်ဆန်သော ကျောက်မျက်ရတနာ တူးဖော်ထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်ရေး များတွင်သာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်နေကြသော်လည်း၊ ရာသီဥတု-ဆက်သွယ်ရေး-နည်းပညာအားနည်းမှုများကြောင့် တွေ့ကြုံလာသော အခက်အခဲများကြားမှ ခေတ်ရေစီးနှင့်အညီ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်လာသည့် ထို PAC ဖွင့်လှစ်သူ လုပ်ငန်းရှင်လူငယ်များအား မိုးကုတ်မီဒီယာမှ အထူးလေးစား အသိအမှတ်ပြုပါသည်)
Posted by မိုးကုတ်မီဒီယာ at 10:48 AM
mgk media gyi yae , photo pyone par oo har!
We aren't understand ur Burglish. Try to contact us with English.
hi, how r u all my Mogok Media group? I am from Mogok, thankalot of your group.When did u start your group?I want to meet all Mogok friend in this media & want to say with them friendly, so that we can help each other & we can make friend other town.ok, i will stop my letter here.
MAY BE HEALTHY & HAPPY MOGOK MEDIA.